Sary nindramina kandida Betafo
Tao amin’ny Faritra Vakinankaratra dia vaofidy ho Ben’ny tanàna ireo kandida narotsaky ny antoko Tia Tanindrazana tao amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Betafo tamin’ny alalan-dRandriatahinamalala Livasoa Moratiavina. Voafidy ihany koa ny kandidan’ny antoko tao amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Manohisoa, Distrikan’i Betafo, dia i Bekoto Abdon Jeriko sy ny tao amin’ny Kaominina Ambanivohitr’i Mandritsara mbola Distrikan’i Betafo ihany koa, dia Rakotondranaivo Roger.
Vaofidy ho Ben’ny tanàna ihany koa Ramanjato Désiré, kandida narotsaky ny antoko Tia Tanindrazana tao amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Vinany, Distrikan’i Mandoto, Faritra Vakinankaratra.
Fa nofoanan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana Fianarantsoa ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina tao amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Mahazoarivo, Distrikan’i Fandriana, Faritra Amoron’i Mania. Nandrotsaka kandida tao amin’ity Kaominina Mahazoarivo ity ny antoko Tia Tanindrazana, tamin’ny alalan-dRakotomaharavo Lucien.
Raha ny lalàna dia tanterahina ao anatin’ny 120 andro ny famerenana ny fifidianana ka ny CENI no hamaritra ny daty hanatanterahana izany.